FOORMULAA GABAABDUU IRREECHI KAN WAAQEFFATTOOTAA TAHUU IFA BAASU. -
FOORMULAA GABAABDUU IRREECHI KAN WAAQEFFATTOOTAA TAHUU IFA BAASU.
bilisummaa October 5, 2015	Leave a comment
Irreeffannaa jechun maal jechu yoo jennee gaafannu, waaqaa galata galchuu jechuudha nuun jedhu. duuba waaqaa galata galchuun guyyaa irreechaa qofaa yoo jennuun guyyaa irreechaa tokkummaadhaan oromoon hundi bahee waaqaaf galata galcha jedhu. amma mee formula kanaan deemnee dubbii tana haa ilaallu,
Waaqaaf galata galchuuf muslimni, kiristaannii fii waaqeffataanis irreecha dhufuu qaba jedhan. hayyee jennee osoo waliif gallee;
Nuti Muslimoonni kan galata galchinuuf ALLAH jennee amanna.
Kiristoon immoo Iyyesuus (Jesus) Jedhanii Amanan; Waaqeffataan immoo Waaqa jedhan. mee walii galuuf jennee Waaqaa fii ALLAH jechuun tokko yoo jennee fudhanne; Iyyesuus immoo kan birooti. ummanni irreecharratti wal gahe kun eenyuuf galata galcha? Iyyesuus moo ALLAH? namni waan adda addaatti amanu akkamiin bakka tokkotti galata galchuu dandaya? moo kan achitti galata galchaniif odaadha? sammuu keeysan fayyadamaa yaadaa nuun jettan, hayyee yaadnee isin gaafanne, mee deebii nuuf kennaa!
gaafiin kiyya akka isiniif ifa tahuuf Logic fayyadamee isinif ibsa.
Lammiileen Ityoopiyaa fii Ertiraa gibira kafaluuf Suudaanitti wal gahan haa jennu. mootummaan gibira guuruuf dhufu kan ethiopiati moo kan ertiraati? moo mootummaa suudaaniitu gibira ummatarraa guura? deebiin keeysan lameenuu ni dhufu kan jedhu yoo tahe, duuba eega lameenuu kan dhufanii maaliif achi dhufuun barbaachise? Mootummaan lameenuu biyyuma isaanii keeysatti ummata isaanii irraa maaliif hin fuune?
mee haala kanaan tokkummaan itti nu yaamutti jirtan tami? akkuma biyya walitti qabnu waaqas walitti qabna yoo jettan gama keenya koottaa islaamawaa. garuu iyyesuus nuuf Rabbii miti. kiristoo wajji isaaf galata galchuuf irreecha hin dhufnu.
Nuti Muslimoonni guyyatti yeroo 5 Rabbiif galata galchutti jirra. guyyaa Iida lameeniitis Ajaja Rabbiif Ergamaa isaa (SAW) guutuuf iida dhayna malee galata galchuu qofaaf karoorfannee miti.
galata galchuun nuuf waan haarayaa miti. waan amatatti hoggu takka goonuu miti. sochii keenya hunda keeysatti galata galchina. akkaataa Rabbiif galata galchinu karaa bareedaas ergamaa Rahmataa Nabi Muhammad (SAW) irraa barree jirra. ragaa qabatamaa Qur’aanaa fii hadiisa barreeyfame kan hin jijjiiramne qabna. nuti jecha qaalluu fi argaa dhageettii irraa haajaa hin qabnu.
Previous Ummanni 150,000 Aanaa Zuwwaay Dugdaa Jiraatu Beelaan Shororkaaya Jira
Next Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO), fi Ijaarsa Bilisummaa Saba Oromoo (IBSO)